“ရွှေမြန်မာ”: June 2008
http://www.alpha.com.mm/alphazawgyi2008/layout.html မှာ နောက်ဆုံးထုတ် စာရိုက်စနစ်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ font နဲ့keyboard ဟာသီးခြားစီဖြစ်တာကြောင့် ဘယ် font နဲ့ ဘယ် keyboard စနစ်ဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အရင် အဟောင်းနဲ့ တတ်နိုင်သမျှမပြောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့။ သာမန် စာရိုက်သူများ စဉ်းစားပြီးစာလုံးရှာဖွေရလွယ်အောင် စာလုံး ၁လုံး ကို ခလုပ်တခုထဲမှာဘဲ ရှိရမယ် ဆို တဲ့ မူကို ချမှတ် ထားပါတယ်။ ဒါမှ တ =w ဆို တာ သိရင် န္တ တ္တ တွေ ကို w မှာဘဲ ထည့်ထားပါတယ်။ လူတွေ အလွတ်ရနေတဲ့wininnwa အငွေ့ အသက်မပျေက်အောင်ျွ ကို တော့ shift w မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ စာလုံး၂ထပ်အတွက် အောက်ချkey ကို သုံးဖို့1 ဘေးက ~ ကို မူလဇော်ဂျီလို ရွေးချယ်ခဲ့ ပြီး zawgyi key လို့ သုံးထားပေမယ့် ဒါဟာ tide key (death key) ပါဘဲ သူကို နှိပ်ရင် ဘာမှ လောလောဆယ်ပေါ်မလာဘဲ နောက် key နဲ့ ပေါင်းမှ စာလုံးသစ်ထွက်မှာပါ။ w နှိပ်ရင် တ သူနှိပ်ပြီး w နှိပ်ရင် တအောက်က တ ဖြစ်တဲ့ တ္တ ကို ရေးနိုင် မှာဖြစ် ပြီး။ နအောက်က တ အတွက် shift အဲဒီ key + w တို ရင် န္တ ဖြစ်လာပါမယ်။ ဒီလို ဘဲ စဉ်းစားပြီး စာလုံးတွေ နှစ်ထပ်ပေါ်ချင်ရင် သုံးရမယ် ရိုက်နည်းကို ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် သနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဿ ကို zawgyi key + o မှာ ထည့် ပါတယ်။ မူလ က ဇော်ဂျီမှာ သုညနဲ့ဝလုံးတူရာက ခွဲလိုက်တဲ့ အခါ0ဘေးမှာ ဝ တခု ထည့်ပေးပြီး မူလ shift +w နဲ့ သုံးသူတွေ အတွက် လဲ ဆက် သုံးခွင့်ပေးထားခဲ့ ပါတယ်။ ဏ ဃ ဌ တွေ ရဲ့အောက် စာလုံး အတွက် သူ့ကို shift + နဲ့ နှိပ်ရသလို့zawgyi key နှိပ်ပြီး shift+ သုံးရအောင် စီစဉ် ထားပါတယ်။ အကြမ်း အားဖြင့် key တခုကို ငါးမျိုးရိုက်နိုင်ပြီး ပေါ် မှာတွေ ကို အရောင်နဲ့ ခွဲပြထားခဲ့ ပါတယ်။
နောက် ထပ်ထည့်ပေးထားတာကတော့ web developer တွေ blogger တွေ ရဲ့ တောင်းဆို ချက်နဲ့ ထည့်ပေးထားတဲ့ ဘာမှပေါ်မလာတဲ့ဘာမှ မရွေ့ တဲ့ နှိပ်မှန်းကို မသိတဲ့ ခလုပ်ပါ။ brake key လို အမည်ပေးထားတဲ့ storage မှာ zaro width space ( မရွေ့ တဲ့ space) ပါ။ စာလုံးတွေ ဖြစ်ပေးဖို့စာလုံးပြီးတို င်း space ထည်ရင် ကျဲ ကုန်တာယ် မထည့်ရင် justify ခေါက် မဆင်းတာ က စ စာလုံးတွေ google က index လုပ်တာတွေမှာ မှန်ကန်အောင် Google မှာ မြန်မာလို ရိုက်ရှာရင် သေချာတွေ့ အောင် ထည့်ကြပါတယ်။ စက်ကဖြတ်ပေးတဲ့ စနစ် ကို ကြိုးစားနေကြပေမဲ့ အသံထွက်စာလုံးတလုံးကိုသာ ဖြတ်နိုင်ပြီး word ကို သိဖို ဖြတ်ဖို့က ဝေးပါသေးတယ် နည်းပညာအပြင် corpus database ကြီးပါ လို လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ယိုးဒယား တောင် 100% မရသေးလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်တော်ကြာစောင့်ရဦးမှာပါ။ လောလောဆယ် စာလုံးကို web မှာ သိမ်းသူ ရိုက်သူတခါတည်း တတ်နိုင်သလောက် word ဖြတ်ထည့်ဖို့တောင်းဆို တဲ့ developer တွေ blogger တွေ အတွက်ထည့်တာမို့မသုံးလဲ အရေးမကြီးပါဘူး။ expert mode ဘဲပေါ့။ ဒါသုံးရဖို့font အသစ်ရှိစရာလဲ မလို ပါဘူး ။ဖောင့်အသစ်မှာ ကမ္ဘာ ရေးတဲံ့ အောက် ဘ တလုံးဘဲတိုးပါတယ်။ အဓိက font မှာ ပြောင်းတာက ဇော်ဂျီကို pdf ပြောင်းရင် အရင် က အနေရာ မှာ A ပေါ်တာမျိုးတွေ စတဲ့bug ကို ဘဲ ပြင်ထားပါတယ်။
www.alpha.com မှ ဦးရဲမြတ်သူ ပြောကြားသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးထုတ်ဝေသူတွေ ဦးစီးတဲ့ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို
၂၈၊ ၆၊ ၂၀၀၈ မှ ၄၊ ၇၊ ၂၀၀၈ အထိ
၁၀ % မှ ၃၀ % အထိ လျော့ချပြီး ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း
ရောင်းချမည့်နေရာကတော့ ပန်းဆိုးတန်လမ်း လောကနက် ပန်းချီပြခန်းတွင်
မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့
ပြောခဲ့ဦးလေ... ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး။ ကြည့် ပြန်သွားပြီ.....
ကျွန်မရဲ့ စက်မှာ Anti-Virus အတွက် Kaspersky Anti-Virus6ကို တင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၄ လပိုင်းမှာတင် update ကုန်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်မ အသစ်ထပ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်မိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ အင်တာနက်ကနေ ကျွန်မ av-i386-daily.zip, av-i386-weekly.zip နှင့် av-i386-cumul.zip ဖိုင် ၃ ဖိုင်ကို download ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီဖိုင်တွေက အမြဲနာရီမလပ် update လုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးတော့ offline တင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ကျွန်မ ယူသွားတဲ့ဟာတွေက version7ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင် version6ကို ဖျက်ချလိုက်ပြီး kaspersky7ကို တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ download လုပ်လာတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖိုလ်ဒါတစ်ခုနဲ့ တစ်နေရာမှာ သိမ်းပြီး Toolbar ရဲ့ အောက်လေးမှာ Kaspersky Anti-Virus icon လေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ box ပေါ်က setting ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Update Setting (box) ပေါ်က add ကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ခုန ကျွန်မသိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ပြီး ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ အဲ အဲဒီမှာ ဖိုင်သုံးဖိုင်ပဲ အမှန်ခြစ်ကလေး ခြစ်ပြီး Kaspersky Lab's update servers အမှန်လေး ဖြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သုံးခုစလုံးကို ရွေးပြီး အိုကေနှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ update settings မှာ daily, weekly, cumul ဖိုလ်ဒါ သုံးခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီး ရင် apply လုပ်ပြီး ok လုပ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Kaspersky ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး Update databases ကိုကလစ် လုပ်လိုက်တဲ့အခါ update running (%) အလုပ်လုပ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ update :complete ဆိုပြီး ပြီးသွားပါတယ်။
ကျွန်မလည်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အားလုံးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ error ပြပါတော့တယ်။ အားလုံးပြီးတော့ စမ်းကြည့်တဲ့အခါ run ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏကြာတဲ့အခါ box တစ်ခု တက်လာပါတော့တယ်။ kaspersky Internet Security key notification ဆိုတဲ့ box က ခဏခဏ သတိပေးပါတော့တယ်။ ပထမ ကျွန်မလည်း မသိဘူး ရမ်းသမ်းလုပ်ကြည့်တာ။ ကျွန်မ စဉ်းစားတာက အရင် version နဲ့ ဆိုင်သလား version7မို့လို့လားဆိုတာ ကျွန်မလည်း မသိတော့ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်နေရင်း တက်တက်လာတော့ ကျွန်မလည်း စိတ်မရှည်တာနဲ့ uninstall ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှ ပြန်မတင်ရသေးပါဘူး။ သူများတွေ မေးကြည့်တော့ offline သုံးရင် အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် AVG ပဲ သုံးရင်လည်း ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဟာလည်း အမြဲ update လုပ်ရတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် အမြဲ မလုပ်ရင်ကော မရဘူးလားဆိုတာပါ တွေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါ ကျွန်မ ဘယ် anti-Virus software ကို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြစေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ အဖေများနေ့ဆိုပဲ သြော်... သူများပြောမှ သိရတယ် ဖေဖေ။ သမီးလေ ဖေဖေရဲ့သမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစေတနာတွေ အမြဲရင်ထဲမှာ ထားမိပေမယ့် ထုတ်ဖော်မပြခဲ့မိဘူးနော်။ တစ်ခါတလေ အလိုမကျရင် ဖေဖေကိုတောင် ပြန်ပြောမိတဲ့ သမီးမိုက်တစ်ယောက်ပါ ဖေဖေ မိဘဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ရှိနေချင်မှာ တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာ သမီးနားလည်ထားပါတယ်။ ဖေဖေရေ... သမီးလေ အမေများနေ့ပဲ မှတ်မိပြီး အဖေများနေ့ကို မေ့ထားမိတယ်။ ဖေဖေလောက်ကောင်းတာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှာမတွေ့တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ သမီး ဖေဖေကို အရမ်းချစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သမီး တစ်ခါမှ ထုတ်ဖော်မပြခဲ့ဘူးနော်။ ဖေဖေ့အပေါ်ဆို အရမ်းဆိုးခဲ့ ပေခဲ့တယ်။ သမီးအလုပ်အပြန်ကို အမြဲလာကြိုတဲ့ဖေဖေကို ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ လာကြိုတာကို ငြိုငြင်သလို ပြောမိတာဟာ ဖေဖေကို နားစေချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်က ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ သမီးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန် အနားမှာ ခြင်ဆေးကုန်လို့ မအိပ်ဘဲ ယပ်တောင်ထိုင်ခပ်ပေးတော့ သမီး ကျိတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဖေဖေဟာ ငါ့အပေါ် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ မေတ္တာတွေ ပေးနေတာ ငါ မခံယူထိုက်ဘူးလေ။ ဖေဖေရယ် သမီးတို့ မိသားစုလေ သေမင်း မခေါ်သရွေ့ မခွဲမခွာ အမြဲနေသွားပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးမှာ နေထိုင်သွားဖို့ အမြဲဆုတောင်းနေမိရင်း အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုရင်းနဲ့ ဖေဖေကို သမီး ကန်တော့လိုက်ပါတယ်နော်။
သိုးမလေးလည်း ပါတယ်နော်။ သေချာရှာကြည့်.....
ဟိတ်.... မျက်စိတစ်ဖက်ညောင်းလို့နော်... ဟဲဟဲ
'Do These Facial Exercises every two hours . . . It is good for your stress relief :-)